မြင်သူတိုင်းကြည်နူးအားကျသွားရလောက်အောင် ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်နဲ့သားဂန်း – Cele Zone
မြင်သူတိုင်းကြည်နူးအားကျသွားရလောက်အောင် ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်နဲ့သားဂန်း
July 6, 2020 - by Yuan
ဘေဘီမောင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို ကြည်နှုးစရာကောင်းပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ဘေဘီမောင်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….။
ဘေဘီမောင်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…။သူမဟာ တစ်ခေတ်တစ်ချိန်ထဲက နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်….။ သူမဟာ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုပါမက မြန်မာဆန်ဆန် အမြဲဝတ်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ယဉ်ယဉ်လေး ဖက်ရှင်ကျမှုကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်မာ ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်…..။
အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ဖက်ရှင်ကျကျ အမြဲဝတ်ဆင်တတ်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ။အခုလည်း ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ပြီး ချစ်သူသားဂန်းနဲ့အတူ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်….။ cele zone ပရိသတ်ကြီးတွက် ဘေဘီမောင်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ျမင္သူတိုင္းၾကည္ႏူးအားက်သြားရေလာက္ေအာင္ ႐ိုမန႔္တစ္ဆန္ဆန္ပုံေလးေတြတင္လိုက္တဲ့ ေဘဘီေမာင္နဲ႔သားဂန္း
ေဘဘီေမာင္ကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ မင္းသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသလို ၾကည္ႏႈးစရာေကာင္းၿပီး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ အခ်စ္ေရးေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္…။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ ေဘဘီေမာင္ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာ အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္….။
ေဘဘီေမာင္ကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံးေလးေတြကိုလဲ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္…။သူမဟာ တစ္ေခတ္တစ္ခ်ိန္ထဲက နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလးျဖစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနတဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္….။ သူမဟာ ပီျပင္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈပါမက ျမန္မာဆန္ဆန္ အၿမဲဝတ္တတ္တဲ့ သူမရဲ႕ ျမန္မာဝတ္စုံေလးေတြနဲ႔ ယဥ္ယဥ္ေလး ဖက္ရွင္က်မႈေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကို အခိုင္မာ ရထားသူလည္းျဖစ္ပါတယ္…..။
ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ အလွတရားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသလို ဖက္ရွင္က်က် အၿမဲဝတ္ဆင္တတ္သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ။အခုလည္း ခရီးထြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ခ်စ္သူသားဂန္းနဲ႔အတူ ႐ိုမန႔္တစ္ဆန္ဆန္႐ိုက္ထားတဲ့ အမိုက္စားပုံေလးေတြကို ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္….။ cele zone ပရိသတ္ႀကီးတြက္ ေဘဘီေမာင္တို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous Article ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပြီး ရယ်မောအပန်းပြေစေရန် ဇာတ်လမ်းတိုလေးတစ်ပုဒ်တင်လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
Next Article မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ ယဉ်ယဉ်လေးလှရက်လွန်းနေတဲ့ နေခြည်ဦး